Famakafakana sy famerenana tanteraka ny mpanonta 3D BQ Witbox 2 | Fitaovana maimaim-poana
BQ niditra tao amin'ny tsenan'ny fanontana 3D 3 taona lasa izay manambara ny famerenany ny mpanonta printy 3 2D Makerbot. Volana roa taorian'ny nanambarana dia nofoanan'izy ireo ilay tetikasa. Sahy sahy nanao dingana sahy izy ireo ary nandefa mpanonta ny endriny manokana, ny BQ WITBOX. Tamin'ny taona manaraka dia nanolotra a scanner (CICLOP) y mpanonta kit mivoryHEPHESTOS).
Nandritra ny taona 2016 dia nivarotra modely niova ho an'ny mpanonta izy roa. Fitaovana miaraka amina endri-javatra vaovao be dia be raha oharina amin'ireo kinova voalohany. Androany isika dia mamakafaka ny ekipa lehibe indrindra, ny BQ WIT BOX 2.
Ny mpanonta BQ Witbox 3 2D dia a Fanontana 3D axis an'ny Cartesian izay manao fiheverana avy amin'ny FDM. Afaka mampiasa karazana isan-karazany ianao 1.75mm filament matevina raha mbola tsy mila fandriana mafana ny fanontana ataonao
Tsy toy ny mpanonta hafa eny an-tsena, ity mpanonta ity mampiasa fitaovana elektronika noforonina sy novokarin'ny BQ, 100% Arduino mifanaraka. Izy io koa dia manana extruder namboarina ho matanjaka sy azo antoka.
2 Lafiny ara-teknika sy manokana ny mpanonta BQ WITBOX 3 2D
2.1 Ny haben'ny pirinty, ny lanja ary ny faritra
2.2 Hafainganana sy famahana
2.3 BQ extruder natao
2.4 Lafiny teknika hafa
2.5 Ny fifandraisana, ny fizakan-tena ary ny rafitra miasa
3 Unboxing sy ny fivorian'ny fanontana BQ WITBOX 3 2D
3.1 Amboary ny sehatra fananganana
3.2 Amboary ny offset aotika mifandraika amin'ny takelaka fananganana.
4 BQ WITBOX 3 2D mpanonta amin'ny antsipiriany
4.1 Avy amin'ny rakitra STL mankany amin'ny GCODE
4.2 Ny fampisehoana
4.3 Mandritra ny fanontana
4.4 Haavo ny mpanonta
4.5 Ny kalitaon'ny pirinty sy ny tahan'ny lesoka.
4.6 Serivisy aorian'ny fivarotana sy ny fanohanan'ny vondrom-piarahamonina Maker
5 Filamenta BQ sy filamenta avy amin'ny marika hafa.
6 Vidiny sy fizarana
9 Tombontsoa sy lafy ratsy
Hampitahaintsika ny sasany amin'ireo toetra mampiavaka an'ity vokatra ity amin'ireo mpifaninana manana toetra mitovy amin'ny teorika:
Hitanay fa nahavita nametraka ny vokariny tsara ny mpanamboatra momba ny fifaninanana miaraka amin'ny sandam-bola.
Ny mpanamboatra sasany dia nanolotra karazana fitaovana vaovao izay mampiditra endri-javatra vaovao manan-danja toy ny Wi-Fi na ny extruder roa, nefa na eo aza izany dia mbola safidy tsara ihany ny mpanonta BQ WITBOX 3 2D.
Lafiny ara-teknika sy manokana ny mpanonta BQ WITBOX 3 2D
Ny haben'ny pirinty, ny lanja ary ny faritra
Fitaovana mavesatra ny mpanonta. Vita ny amin'iny 30 kilos Midika izy ireo fa ho anao ny manala azy amin'ny boaty, rehefa mamaha azy ianao ary mampakatra azy amin'ny latabatra na fanaka avelanao hametraka azy. Ny antony nahatonga ny 90% ny chassis ny mpanonta dia vy, toy ny tanky. Mba hampidirana a faritra fanontana tena lehibe ( 297x210x210 mm) ny mpanonta dia takiana hananana refy malala-tanana, 508x485x461 mm tsy manisa ny coil sy ny fanohanana azy.
Hafainganana sy famahana
Amin'ity lafiny ara-teknika ity dia tena miavaka ny mpanonta, afaka manonta amin'ny fanapahan-kevitra hatramin'ny 20 microns amin'ny hafainganam-pandeha hatramin'ny 200 mm / s. Manana ekipa miavaka izahay izay tsy hanome tsiny izay kasainay hatao pirinty. Tsy mila mametra ireo sanda ireo ihany isika rehefa mampiasa filamenta manokana, toy ny filament malefaka izay atolotra hatao pirinty mihoatra ny 60-80 mm / s
BQ extruder natao
El extruder miaraka amin'ny rafitra "Double Drive Gear" novolavolain'ny BQ dia singa tsara kalitao izay nanononanay ny fitaovana rehetra azonay nidirana (ary ho hitanao amin'ny lahatsoratra hafa amin'ity bilaogy ity), filamenta, hazo, bosoa, filament malefaka, PETG ...
Ity extruder ity dia mampiditra sprockets amin'ny lafiny roa amin'ny filament mba hampitombo ny hery izay atao amin'ny fitarihana ny fitaovana mankany amin'ny hotend. ihany koa mampiditra fantsona PTFE (teflon) izay mampihena ny disadisa ny filamentana amin'ny fihetsiny mankany amin'ny hotend izay hiantoka ny hafanan'ny filamentana raha vao ampidirina ao anaty hotend. Ireo fanampiana rehetra ireo dia miantoka fa tsy hisy fitohanana ao amin'ny fanontana na inona na inona filament ampiasaintsika.
Ny tena lesoka amin'ity rafitra ity dia izay ny fantsona Teflon dia tsy mahazaka mari-pana mihoatra ny 240ºC ka ny fanontana ny ABS sy ny filamenta mitaky mari-pana ambony dia voahilika tanteraka.
Indraindray dia tsy maintsy soloinao ny fantsona PTFE ao anatinyNa izany na tsy izany, dingana tsotra izay tsy haharitra mihoatra ny 10 minitra. Na izany aza, ora maro amin'ny fanontana no hatao alohan'ny tsy maintsy anaovanao ny fanoloana voalohany.
Ao amin'ny tontolo misy ny zava-drehetra ny zava-drehetra, na dia tsy mampiasa ny antsasaky ny asan'ny vokatra aza isika any aoriana, dia mahagaga izany ny mpanamboatra dia tsy nampiditra fandriana mafana tamin'ny toetran'ny BQ WITBOX 2. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka amin'ny antsipiriany momba izay mety sy tsy azo atao pirinty isika raha tsy manana solosaina misy fandriana mafana.
Ny mpanonta dia manana famolavolana tsotra sy miasa izay saika ny zava-drehetra dia ahena ho tsipika mahitsy. Takelaka lehibe mangarahara amin'ny frame methacrylate fotsy amin'ny tarehy hita maso rehetra an'ny ekipa ary a vatana vita amin'ny vy natao ho an'ny afaka mametraka mpanonta mitovy maromaro izahay.
Teboka fanampiny tokony hankasitrahana dia ny nahafahan'izy ireo namolavola ny seta ka tsy misy tariby hita, tena matihanina ny valiny.
ihany koa dia nampiditra hidin-trano amin'ny lakile eo am-baravarana izay manome fidirana amin'ny atin'ny mpanonta, antsipirihany maningana indrindra raha toa ka hizaha ny mpanonta any amin'ny faritra mety misy ankizy na olona hafa tsy mahalala izay ny atin'ny mpanonta dia tsy tokony hokarakaraina mandritra ny fanontana.
Ny fifandraisana, ny fizakan-tena ary ny rafitra miasa
Na dia manana port COM aza ny mpanonta cny asany tsara indrindra dia ny fanontana ireo rakitra GCODE kopia mivantana amin'ny SD. Ny fampisehoana izay mampiditra ny mpanonta dia misy menio mora sy mora azo hanatanterahana ny hetsika ilaina amin'ny fampiasana azy.
Afaka nampifandray ny mpanonta tamin'ny alàlan'ny port COM izahay ary namindra ireo famaky, saingy ny hetsika tratra dia tsy milamina toa ilay vita avy amin'ny menio fitaovan'ny fitaovana.
Unboxing sy ny fivorian'ny fanontana BQ WITBOX 3 2D
Noho ny habeny sy ny lanjan'ny vokatra, ny fonosana dia manana rafitra fanokafana toa ny an'ny fahitalavitra ankehitriny. Ahodino ny tohana sasany ary sintomy ambony ilay boaty. Hitantsika fa voaaro tsara ny mpanonta ka tonga amin'ny toe-javatra tonga lafatra sy boaty misy kojakoja isan-karazany (ny sasany na 3D aza vita pirinty) ary boky torolalana fampianarana matevina.
Lavinay avy hatrany ny famakiana ilay boky torolalana mba hahavitana anaoFikarohana Internet haingana momba ny dingana hampiasana ny mpanonta.
Manana fantsona Youtube ny BQ izay ahitantsika horonan-tsary ho an'ireo asa mahazatra indrindra hotanterahinay miaraka amin'ny WITBOX 2, hitanay ilay video mety ary tao anatin'ny 15 minitra monja dia efa nesorinay ilay immobilizer tamin'ny kalesy fanontam-pirinty, nitaingina ireo takelaka, ny fanohanan'ny filament ary izahay dia milalao miaraka amin'ny menio mpanonta mba hanamboarana ny fitaovana.
Amin'ny fampiasana horonantsary iray hafa ananan'ny BQ ao amin'ny fantsona YouTube azy, dia manatanteraka ny kalibration ilaina izahay.
Vita amin'ny fihodinana visy 3. Ny tanana dia azo atao amin'ny tanana tsy mila fitaovana ary tsy maintsy fantarintsika ihany ny fotoana itodihan'ny mpanonta printy hitsaharana mihodina.
Amboary ny offset aotika mifandraika amin'ny takelaka fananganana.
Ity dingana ity dia tsy dia mailaka loatra, tsy maintsy atao izany amboary ny elanelana misy eo anelanelan'ny noza sy ny lovia ka rehefa manonta sosona fitaovana matevina manokana dia manana habaka ampy fotsiny ianao. Raha mamela toerana kely isika, dia hangonina ao anaty noza ny fitaovana, ankoatry ny zavatra hafa, ny fitohanana, raha avelantsika be loatra ilay fitaovana dia tsy ho raikitra eo anelanelan'ny sosona. Aorian'ny fitsapana maro sy fikarohana amin'ny Internet dia resy lahatra izahay fa ny safidy tsara indrindra dia ny fametrahana takelaka taratasy 80 grama eo anelanelan'ny noza sy ny fotony ary hampihena ny elanelana mandra-pahasarotantsika mamindra ilay takelaka amin'ny tanantsika.
Dingana farany tokony hatao alohan'ny fanontana, mila omenao a fitsaboana sahaza ho an'ny tontolon'ny fanontana. Palitao mora vidy Nelly lacquer dia ampy ny mahazo ireo zavatra vita pirinty hifikitra tsara amin'ny ankamaroan'ny pirinty (tokony averina alohan'ny fanontana tsirairay avy izy io ary diovina ny fototr'ilay mihoatra isaky ny 10 pirinty). Na izany na tsy izany dia manoro hevitra anao izahay hanadino tanteraka ny olan'ny ady, ampiasao hatrany ny safidy BRIM an'ny Cura. Ny sosona kely milimetatra vitsivitsy dia hanampy ny fahatsapana ny perimeter ny sombin-javatra, mandany fitaovana kely iray nefa manome antoka tanteraka ny fifikirana amin'ilay sombin-tany.
Hatramin'ny namongaranay ny mpanonta mandra-panombohanay nanontana ny zavatra voalohany, zara raha nisy antsasak'adiny lasa.
BQ WITBOX 3 2D mpanonta amin'ny antsipiriany
Amin'ity fizarana ity dia hitaky izahay ary hitady ny haavon'ny kalitao sy ny antsipiriany izay mety ho toa tafahoatra. Toy izany koa, ny mason-tsivana ampiasaina dia tena subjectif ary angamba tsy ekenao ny iray amin'ireo fehin-teninay, avelao izahay haneho hevitra momba ny hevitrao.
Hatramin'ny 3D prints Izy ireo dia fitaovana mavesatra izay miankina amin'ny kalitaon'ny fanamboarana, azon'izy ireo atao ny manolotra fihoarana mandritra ny fanontana dia tokony hapetraka amin'ny sehatra matevina sy amin'ny toerana malalaka izy ireo.
El Fanohanana ny tadin'ny filamentanana hita ao amin'ny ambadiky ny mpanonta ary ny filament dia ampidirina amin'ny alàlan'ny lavaka iray izay amin'ny alàlan'ny fantsom-plastika dia mitarika ilay fitaovana mankany amin'ny extruder. Ny fantsona Teflon izay mivoaka avy amin'ny coil mankany amin'ny extruder dia mampiasa ny kaonty tsy tapaka hijerena ny lalany.
Raha manana toerana malalaka ianao, ity vahaolana ity dia tena kanto ary miasa koa, raha ny mifanohitra amin'izay no mitranga dia tianao ianao ary te hampihena ny halalin'ny mpanonta araka izay tratra ianao dia aleonao manonta fanohanana hametrahana ny coil amin'ny mpanonta. Ny rakitra .stl ho an'ny fanontana an'ity haino aman-jery ity dia azon'ny rehetra ao amin'ny tranonkalan'ny mpanamboatra.
Toy izany koa ny tariby mandeha amin'ny herinaratra. Izy io dia miditra amin'ny mpanonta amin'ny zoro mahitsy, raha toa ka manome tariby misy zoro 90 degre miaraka amin'ireo fitaovana ilay mpanamboatra dia hahazo santimetatra fanampiny vitsivitsy isika.
Avy amin'ny rakitra STL mankany amin'ny GCODE
Ireo rakitra ampiasain'ny mpanonta printy hanontana ireo zavatra ireo dia GCODEe. Ka, toy ny ankamaroan'ny mpanonta eny an-tsena ilaina ny mampiasa rindrambaiko laminator sasany hanova ny endrika malaza STL mankany GCODE . Aminay nampiasa Cura 2.4 izahay misy valiny tena tsara, fa manana safidy hafa toa ny Slic3r, Simplefy3D, skeinforge…. Ny isan-karazany amin'ny rindrambaiko misy ankehitriny dia afaka manokana lahatsoratra hiresahana manokana momba azy fotsiny izahay, nisafidy ny tsy hamorona rindrambaiko manokana ny Bq.
Raha vantany vao misy karatra SD atsofoka ao anaty mpanonta miaraka amin'ny fisie GCODE izay tiana hatao pirinty, dia azontsika atao daholo ny manao ny dingana rehetra ilaina amin'ny efijery mpanonta.
Mandritra ny fanontana amin'ny ny efijery dia ampandrenesina antsika ny anaran'ny zavatra vita pirinty, ny hafanan'ny extruder, ny hafainganam-pandehan'ny fanontana, ny% vita pirinty ary ny fotoana nanontanay. Miaraka amin'ny efijery lehibe toy izany dia malahelo fampahalalana bebe kokoa isika, na dia tsy ilaina aza izany, dia hankasitrahana izany. Ny masontsivana mety hisy dia ny fotoana sisa, mm sy grama vita pirinty ary sisa
Mandritra ny fizotran'ny fanontana avy amin'ny efijery dia afaka miato isika, mijanona, manova ny hafanana sy ny hafainganam-pandehan'ny fanontana. Mahaliana ihany koa ny afaka mampitombo ny fikorianan'ny fitaovana extruded.
Mandritra ny fanontana
Ny faritra fanontana dia manana refy malala-tanana ary afaka manonta zavatra marobe isika tsy misy olana na afaka manonta sombin-javatra lehibe tsy mila fanovana amin'izy ireo isika. Raha ny fanontana pirinty zavatra marobe miaraka, ny famerenana ny filamenta ao anaty extruder sy ny marimarina amin'ny famaky dia manome antoka fa ny fanovana avy amin'ny zavatra iray mankany amin'ny iray hafa dia madio sy marina.
Na dia marina aza fa mandritra ny fanontana dia azonao atao ny miato ny fanontana, raha ilaina dia manaova fanovana filamentana fa tsy manoro hevitra azy izahay satria ny sosona nanaovana ny fiatoana dia ho hita eo amin'ilay zavatra vita pirinty. Azo antoka fa noho ny toetra ara-nofo an'ny PLA io, satria lasa mangatsiaka loatra ilay sosona izay ezahantsika harahina mafy, dia tsy lavorary ny firaisana.
Ny hafainganam-pandehan'ny pirinty dia safidy mahaliana ary sarotra koa. Eny OK ny mpanonta dia mahavita manonta amin'ny hafainganam-pandeha 200mm / s tsy ny fitaovana rehetra manana ny toetra ara-batana ilaina mahazaka haingam-pandeha toy izany. Ho an'ny fitaovana tsirairay dia mila manao fitsapana marobe isika mandra-pahitanay ny fandaminana mety. Ary mahaliana fa milalao an'io sanda io isika satria afaka hanafohezana ny fotoana fanontana.
Andininy iray izay tsy nahitanay fanazavana izany ny fotoana fanontana andrasana avy any Cura dia somary fohy kokoa noho ny tamin'ny fotoana tena fanontana. Heverinay fa izany dia vokatry ny fanovana nataon'ny BQ tamin'ny firmware an'ny mpanonta mba hampihenana ny tabataba mandritra ny fanontana.
Haavo ny mpanonta
Ny BQ WITBOX 3 2D Printer dia toy ny tabataba rehetra, mitabataba. Saingy misy karazany maro izay mety hisy fiantraikany amin'ny haavon'ny tabataba avoakany. Ny fanontana amin'ny hafainganam-pandeha haingam-pandeha dia avo kokoa, raha nesorintsika ny methacrylate ambony hametrahana ny fanohanan'ny filamenta tsy voatery atao dia mafy kokoa izany, raha manonta miaraka amin'ny varavarana misokatra isika dia avo kokoa. Fa na dia ny toe-javatra ratsy indrindra azo tratrarina aza, miaraka amin'ireo fahasosorana rehetra izay vao noresahintsika.
Raha manana azy io ao amin'ny efitrano misy varavarana mihidy ao amin'ireo efitrano mifanila aminy isika, dia hum kely fotsiny no re. Miaraka amin'ny smartphone sy fampiharana fandrefesana DB iray metatra miala ny mpanonta ananantsika sanda eo anelanelan'ny 47 sy 57 dB ary rehefa miala ny efitrano sy manidy varavarana isika dia manana sanda 36 dB. Tokony ho tadidinao fa tsy dia mazava loatra ireo karazana fampiharana ireo, fa manome antsika hevitra marokoroko.
Ny kalitaon'ny pirinty sy ny tahan'ny lesoka.
Raha misy zavatra tianay indrindra momba ity mpanonta ity dia ny kalitao avoakany izay anaovany pirinty. Na amin'ny fanapahan-kevitra avo lenta na ambany fanapahan-kevitra, dia milamina tsara ny fanontana ary tsy misy lesoka. Efa nanao pirinty izahay fitsapana adin-tsaina isan-karazany ary mora apetraky ny mpanonta izany.
Serivisy aorian'ny fivarotana sy ny fanohanan'ny vondrom-piarahamonina Maker
Ara-tantara, BQ dia nanana vondrom-piarahamonina mavitrika tokoa ho an'ny vokatra rehetra afaka mamaha ny olan'ny vokatra na dia talohan'ny nanaovana ny serivisy teknika aza. Ao amin'ny forum ofisialy Mibqyyo dia misy kofehy ho an'ity vokatra ity izay andraisan'ny mpiasan'ny orinasa anjara sy valiny ireo fanontaniana rehetra mipoitra.
ihany koa ny mpanamboatra dia manome an-tariby ho an'ny mpanjifany telefaona, twitter ary mailaka manandrana manarona ny fomba fifandraisana rehetra mety hitranga. Avy amin'ny làlana rehetra ampiasainay dia homeny izahay a fitsaboana sahaza sy marina, mila mijery fotsiny ireo hevitra sy hafatra farany vao hahatsapa izany ianao.
Manjary a tetikasa loharano misokatra dia mora ny mahita fanovana samy haavo ara-batana sy ara-pitaovana amin'ny lafiny sasany amin'ny mpanonta. Ny mpanamboatra aza dia manana ny mpampiasa azy manokana ao amin'ny vavahadin'i Thingiverse. Teboka bonus iray hafa ho an'ny BQ amin'ny fanohanana ny Open Source !!
Na izany aza, heverinay fa misy toerana be loatra izay ahitantsika antontan-taratasy ary fitaovana fanohanana ho an'ny mpanonta; ny tranonkala ofisialy, ny vavahady Diwo, mibqyyo, Youtube. Ny mpanamboatra dia tokony hanao ezaka hifantoka amin'ny fampahalalana rehetra araka izay tratra.
Filamenta BQ sy filamenta avy amin'ny marika hafa.
Ny mpanonta dia aterina miaraka amina fonosana iray kilao an'ny Red PLA Filament. Ny filamatra BQ dia mety tsara amin'ny fanaovana fahatsapana voalohany miaraka amin'ny mpanonta BQ WITBOX 3 2D anay. Mifanaraka tsara amin'ny sehatra fananganana, mikoriana tsara ary tsy tapaka avy amin'ny extruder. ny zavatra vita pirinty, na dia ambany aza ny isan-jaton'ny famenoana dia hanana hamafin'ny fahitana. Etsy ankilany, ity henjana ity dia hampivoatra antsika bebe kokoa sarotra ny manala ireo rafitra manohana amin'ny zavatra sarotra.
Ny kalitao sy ny fahamendrehan'ny lohan'ny extrusion dia namela anay hanonta amin'ny alàlan'ny filamenta isan-karazany amin'ny mpamokatra samihafa, hahazoana vokatra tena tsara miaraka amin'izy rehetra.
Azonao atao ny mijery ireo lahatsoratra vitsivitsy navoakanay niaraka tamin'ireto filament ireto:
Izahay dia mizaha filamenta bosoa sy hazo avy amin'ny FormFutura
Mamakafaka ny filamentan'ny karazana samihafa omen'ny Filament2Print: FilaFlex, fibre karbonika, filamentana volamena ary filament metaly isika
Hodinihintsika ny filamentan'ny PrintedDreams PLA, filament mavokely amin'ity indray mitoraka ity
El ny vidiny ofisialin'ny mpanonta dia 1690 € ao amin'ny fivarotana an-tserasera an'ny mpanamboatra azy, ary aparitaka amin'ny ankamaroan'ny magazay elektronika mpanjifa. Noho izany dia tsotra fa amin'ny fampielezan-kevitra manokana ataon'ireny orinasa ireny dia ahitantsika azy amin'ny vidiny ambany aza.
Aorian'ny fitsapana ny mpanonta mandritra ny 45 andro ary ny fanontana izany mihoatra ny 5 ora isan'andro, dia afaka manamafy isika fa miatrika fitaovana tena azo antoka., izay aorian'ny fanontana maro sy maro dia manohy manonta toa ny andro voalohany. Miaraka amin'ny hafainganam-pandeha avo lenta sy famahana vahaolana.
Na eo aza ny tsy fampidirana am-pandriana mafana, ny filamenta isan-karazany izay hitantsika fa tsy mitaky an'ity endri-javatra ity dia hahatonga antsika tsy hahita azy io. Izahay dia efa nizaha toetra ny karazana filamenta rehetra ary afaka manome toky anao izahay fa ny mpanonta dia tena afaka mahazo valiny tsara amin'izy ireo.
Malahelo ny fifandraisana tsy misy tariby izahay ary mora ny fikirakirana avy amin'ny finday.
Ny habe sy ny lanjan'ilay mpanonta dia hahatonga ny mpividy marobe hanalavitra ny tsy fananany toerana hametrahana azy ao an-trano. Fa raha tsy anao izany hanana ekipa manana fiasa tena tsara amin'ny vidiny mirary ianao.
Faritra fanontana tena malala-tanana
Tetikasa loharano misokatra
Mamaly tsara ny filamenta tsy mitovy amin'ny mpamokatra maro karazana
Varavarana azo hidiana mba hahazoana fiarovana fanampiny
Ny toerana aorinan'ny filament dia mampitombo ny haben'ny mpanonta
Tsy manana fifandraisana Wi-Fi
Ny toerana misy ny mpampitohy herinaratra dia tsy mety
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitaovana maimaim-poana » Fanontana 3D » Fanadihadiana sy fanandramana feno an'ny mpanonta BQ Witbox 3 2D
Annie dia hoy izy:
Manana fanontaniana aho. Ny marika BQ hatramin'ny androany dia tsy manome serivisy ara-teknika, satria nakatona ny orinasa. Inona no azo atao amin'ireo mpanonta printy 3d an'ity marika ity raha tsy misy io fanohanana io?
Mamaly an'i Annie
Araka ny voalazanao, ny BQ dia tsy misy intsony toy izany, noho ny fatiantoka ara-toekarena dia amidy tamin'ny vondrona Vietnamianina izy io, ary ankehitriny maro amin'ireo mpiasan'izy ireo no toa tsy navela karama ary mpanjifa tsy nahazo tohana ara-teknika. Hatramin'ny tsy ela akory izay, Smart Labs monina ao Madrid dia niandraikitra ny fanomezana serivisy teknika ivelany ho an'ny fitaovana BQ, fa rehefa nikatona ny orinasa, dia najanon'izy ireo ihany koa ny fanomezana fanohanana noho ny tsy fahampian'ny fitaovana.
Avy amin'ny tompona ankehitriny, heverina fa hanome fanampiana any Espana amin'ny alàlan'ny VimSmart mankany amin'ny BQ izay mbola manana antoka izy ireo, saingy tsy fantatro tsara raha mitranga izany, na inona no hitranga amin'ireo fitaovana izay tsy misy intsony manana antoka ... Toa tsy maintsy mieritreritra ny manamboatra ny tenanao ianao raha afaka, na manova fitaovana ...
Ity mpanonta 3D ity dia mahavita manamboatra siligaoma mahazatra
Orange Pi dia efa manana fivarotana ofisialy miaraka amina fonosana snap Canonical